【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】ဆီးခြိုကွောငျ့ ဖွဈသော ခွထေောကျအနာ (Diabetes foot) အကွောငျးသိကောငျးစရာ | Opinion Leaders
ကမ်ဘာတဈဝနျးမှာ ဆီးခြို သှေးခြို ဖွဈပှားသူ အရအေတှကျဟာ နှဈစဉျတိုးပှားလကျြရှိသညျ။ အဝလှနျခွငျး၊ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုနညျးခွငျး၊ စိတျဖိစီးမှုမြားခွငျး စတဲ့ စားသောကျနထေိုငျမှုပုံစံတှကေ အမြိုးအစား ၂ ဆီးခြို ကိုပိုဖွဈစပေါတယျ။ ဆီးခြို ရောဂါသညျတှကေ sugar control (တနညျးအားဖွငျ့ သကွားဓါတျ အတကျအကြ ထိနျးညှိဖို့) ရဖို့ ဆရာဝနျညှနျကွားတဲ့ ဆီးခြိုထိနျးဆေးတှေ မှနျမှနျမှီဝဲဖို့ လိုသလို မြှတတဲ့ စားသောကျမှုပုံစံ (diet)၊ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုတှေ လုပျခွငျးကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ဆီးခြိုမထိနျးနိုငျရငျတော့ အခြိနျကွာလာရငျ ဆီးခြိုရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှေ ခံစားရပီး သကျတမျးတိုနိုငျပါတယျ။ ဒီအပတျမှာတော့ ဆီးခြိုရောဂါရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှထေဲက ဆီးခြိုကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ခွထေောကျအနာ (Diabetes foot) အကွောငျးဖျောပွပေးမှာပါ။
ဆီးခြိုသမားတှဟော ဘာကွောငျ့ ခွထေောကျမှာ အနာဖွဈလှယျကွတာလဲ?
(၁)ခွထေောကျရှိ အာရုံကွောမြားထိခိုကျခွငျး (peripheral neuropathy)
ဆီးခြိုရောဂါ အခြိနျကွာလာတဲ့အခါ ကောငျးကောငျး control မရတဲ့အခါ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးအနနေဲ့ အာရုံကွောတှေ ထိခွငျးကွောငျ့ ထုံခွငျး၊ ကငျြခွငျး၊ အာရုံခံစားမှုမသိခွငျးတို့ ဖွဈလာပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ခွထေောကျ၊ လကျတှမှော ခွအေိတျ၊ လကျအိတျစှပျထားသကဲ့သို့ (Glove and stocking distribution) အတိုငျး ထုံကငျြခွငျး ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ခွေ၊ လကျမြားထုံကငျြခွငျးကွောငျ့ နောကျဆကျတှဲအနဖွေငျ့ ပွငျပမှ ထိခိုကျဒဏျရာရခွငျးကို မသိခွငျး (ဥပမါ-သံစူးခွငျး၊ ပူတဲ့ အရာဝတ်ထုကို ခံစားမှုမသိခွငျးကွောငျ့ ထိတှမေိ့ခွငျး) ကွောငျ့ အနာပိုဖွဈလှယျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ခွဖေဝါးလို နရောမြိုးမှာ ပိုဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ အနာဖွဈရာကတဆငျ့ အနာကကျြမလှယျခွငျး၊ ပိုးဝငျခွငျးတို့ကွောငျ့ ခွလေကျ ပုပျလာခွငျး၊ ဖွတျပဈရခွငျးအထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
(၂)ခွထေောကျသို့သှားသော သှေးကွောမြား ကဉျြးခွငျး၊ ပိတျခွငျး
ခွဖြေား လကျဖြားမြားသို့ သှေးရောကျတာနညျးခွငျးကွောငျ့ အနာဖွဈရငျ အနာကကျြရနျခကျခွငျး၊ ပိုးဝငျခွငျး၊ ခွထေောကျပုပျသှားခွငျးမြား ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အနာတခုဖွဈလာပါကလညျး သှေးတှငျးသကွားဓါတျမြားခွငျး၊ သှေးလှညျ့ပတျမှုမကောငျးခွငျး၊ ကိုယျခံအားစနဈကဆြငျးခွငျးကွောငျ့ ပိုးဝငျလှယျခွငျး တို့ကွောငျ့ အနာကကျြရနျ ခကျခဲပါတယျ။
မြားသောအားဖွငျ့ အသားမာတကျနသေောနရော အရပွေားတှငျတှရေ့တတျပွီး ထိုမှတဆငျ့ အနာ (punch out ulcer) ဖွဈကာ ပိုးဝငျခွငျး ခွထေောကျသှေးမလြှောကျခွငျးတို့ကွောငျ့ ပွညျတညျခွငျး၊ ဘေးပတျလညျ တဈရှုးမြားပါ ရောငျရမျးခွငျး၊ အရိုးထိ ပြံနှံ့ ပွညျတညျခွငျး၊ ခွထေောကျပုပျခွငျး၊ ဖွတျပဈရခွငျး၊ သှေးဆိပျတကျခွငျး စသညျတို့ဖွဈနိုငျကာ အသကျဆုံးရှုံးသညျအထိ ဖွဈနိုငျပါသညျ။
ထို့အပွငျ အာရုံကွောထိခိုကျခွငျး (neuropathy) ကွောငျ့ ခွထေောကျမှာရှိတဲ့ အရိုးနဲ့ အဆဈလေးတှေ ရောငျရမျးခွငျး၊ အဆဈလှဲခွငျး ကွောငျ့ deformity ခွထေောကျပုံပကျြခွငျးလညျး ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါကိုတော့ Charcot neuropathy လို့ချေါပါတယျ။ အခွားသော အာရုံကွောထိခိုကျစတေဲ့ ရောဂါတှမှောလညျး ရတတျပမေယျ့ ဆီးခြိုရောဂါကွောငျ့ တှရေ့အမြားဆုံးဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဆီးခြိုရောဂါရှငျတှဟော မိမိခွထေောကျမှာ အနာမဖွဈအောငျ သခြောဂရုစိုကျသငျ့သလို ဖွဈလာပါကလညျး အမွနျဆုံးကုသမှုခံယူဖို့လိုမှာပါ။
- သှေးတှငျးသကွားဓါတျမမြားအောငျ သတျမှတျထားသော ပမာဏအတှငျးရှိအောငျ ထိနျးညှိပါ
-မိမိခွထေောကျကို ထိခိုကျဒဏျရာရမိတာ ရှိ မရှိနစေ့ဉျစဈဆေးပေးပါ
-ခွထေောကျကို ရနှေေးနှေးနှငျ့ နစေ့ဉျဆေးကွောပေးပါ
-ခွသေညျး လကျသညျး မှနျမှနျညှပျပါ
-ဖိနပျမပါဘဲ ခွဗေလာနှငျ့သှားခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ
-ဖိနပျမစီးခငျ ဖိနပျအတှငျး ကြောကျခဲ အခွား ပစ်စညျးတခုခု ဝငျနေ မနေ စဈဆေးပါ
-ကွပျလှနျးသော ဖိနပျမြား မစီးသငျ့ပါ
-အရညျကွညျဖုမြားရှိပါက မိမိဘာသာ မဖောကျပဈပါနှငျ့
-ခွထေောကျ ထုံခွငျး ကဉျြခွငျးမြားရှိပါက တနှဈတကွိမျ ဆရာဝနျနှငျ့ ပွသ စဈဆေးပါ
-ခွထေောကျအနာ ထပျမဖွဈအောငျ ခွထေောကျပုံပကျြခွငျး (Charcot neuropathy) ကာကှယျသညျ့အနဖွေငျ့ လိုအပျလြှငျ ဆီးခြိုသမားမြားအတှကျ သီးသနျ့ထုတျထားသော ဖိနပျမြားဖွငျ့ ကာကှယျပါ
- ရနေဲ့ သနျစငျအောငျဆေးကွောပါ
-ပွောငျအောငျသုတျပီး အနာလိမျးဆေးရညျနဲ့ ဆေးပါ
-အနာကို ဖုံမဝငျအောငျ သခြောဖုံးအုပျပွီး ဆရာဝနျနှငျ့ပွသပါ
-အနာဘယျလောကျသေးသေး မပေါ့ဆဘဲ သခြောဂရုစိုကျဖို့လိုပါတယျ။
ဇီဝက ( ဆေး -၁ )
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ဆီးချို သွေးချို ဖြစ်ပွားသူ အရေအတွက်ဟာ နှစ်စဉ်တိုးပွားလျက်ရှိသည်။ အဝလွန်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း စတဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံတွေက အမျိုးအစား ၂ ဆီးချို ကိုပိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဆီးချို ရောဂါသည်တွေက sugar control (တနည်းအားဖြင့် သကြားဓါတ် အတက်အကျ ထိန်းညှိဖို့) ရဖို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ ဆီးချိုထိန်းဆေးတွေ မှန်မှန်မှီဝဲဖို့ လိုသလို မျှတတဲ့ စားသောက်မှုပုံစံ (diet)၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ခြင်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဆီးချိုမထိန်းနိုင်ရင်တော့ အချိန်ကြာလာရင် ဆီးချိုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ခံစားရပီး သက်တမ်းတိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာတော့ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေထဲက ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်အနာ (Diabetes foot) အကြောင်းဖော်ပြပေးမှာပါ။
ဆီးချိုသမားတွေဟာ ဘာကြောင့် ခြေထောက်မှာ အနာဖြစ်လွယ်ကြတာလဲ?
(၁)ခြေထောက်ရှိ အာရုံကြောများထိခိုက်ခြင်း (peripheral neuropathy)
ဆီးချိုရောဂါ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ ကောင်းကောင်း control မရတဲ့အခါ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအနေနဲ့ အာရုံကြောတွေ ထိခြင်းကြောင့် ထုံခြင်း၊ ကျင်ခြင်း၊ အာရုံခံစားမှုမသိခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေထောက်၊ လက်တွေမှာ ခြေအိတ်၊ လက်အိတ်စွပ်ထားသကဲ့သို့ (Glove and stocking distribution) အတိုင်း ထုံကျင်ခြင်း ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ခြေ၊ လက်များထုံကျင်ခြင်းကြောင့် နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ပြင်ပမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို မသိခြင်း (ဥပမါ-သံစူးခြင်း၊ ပူတဲ့ အရာဝတ္ထုကို ခံစားမှုမသိခြင်းကြောင့် ထိတွေ့မိခြင်း) ကြောင့် အနာပိုဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေဖဝါးလို နေရာမျိုးမှာ ပိုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အနာဖြစ်ရာကတဆင့် အနာကျက်မလွယ်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် ခြေလက် ပုပ်လာခြင်း၊ ဖြတ်ပစ်ရခြင်းအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၂)ခြေထောက်သို့သွားသော သွေးကြောများ ကျဉ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း
ခြေဖျား လက်ဖျားများသို့ သွေးရောက်တာနည်းခြင်းကြောင့် အနာဖြစ်ရင် အနာကျက်ရန်ခက်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ခြေထောက်ပုပ်သွားခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အနာတခုဖြစ်လာပါကလည်း သွေးတွင်းသကြားဓါတ်များခြင်း၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုမကောင်းခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ပိုးဝင်လွယ်ခြင်း တို့ကြောင့် အနာကျက်ရန် ခက်ခဲပါတယ်။
များသောအားဖြင့် အသားမာတက်နေသောနေရာ အရေပြားတွင်တွေ့ရတတ်ပြီး ထိုမှတဆင့် အနာ (punch out ulcer) ဖြစ်ကာ ပိုးဝင်ခြင်း ခြေထောက်သွေးမလျှောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်တည်ခြင်း၊ ဘေးပတ်လည် တစ်ရှုးများပါ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရိုးထိ ပျံနှံ့ ပြည်တည်ခြင်း၊ ခြေထောက်ပုပ်ခြင်း၊ ဖြတ်ပစ်ရခြင်း၊ သွေးဆိပ်တက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်နိုင်ကာ အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် အာရုံကြောထိခိုက်ခြင်း (neuropathy) ကြောင့် ခြေထောက်မှာရှိတဲ့ အရိုးနဲ့ အဆစ်လေးတွေ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဆစ်လွဲခြင်း ကြောင့် deformity ခြေထောက်ပုံပျက်ခြင်းလည်း ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကိုတော့ Charcot neuropathy လို့ခေါ်ပါတယ်။ အခြားသော အာရုံကြောထိခိုက်စေတဲ့ ရောဂါတွေမှာလည်း ရတတ်ပေမယ့် ဆီးချိုရောဂါကြောင့် တွေ့ရအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆီးချိုရောဂါရှင်တွေဟာ မိမိခြေထောက်မှာ အနာမဖြစ်အောင် သေချာဂရုစိုက်သင့်သလို ဖြစ်လာပါကလည်း အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူဖို့လိုမှာပါ။
- သွေးတွင်းသကြားဓါတ်မများအောင် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏအတွင်းရှိအောင် ထိန်းညှိပါ
-မိမိခြေထောက်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမိတာ ရှိ မရှိနေ့စဉ်စစ်ဆေးပေးပါ
-ခြေထောက်ကို ရေနွေးနွေးနှင့် နေ့စဉ်ဆေးကြောပေးပါ
-ခြေသည်း လက်သည်း မှန်မှန်ညှပ်ပါ
-ဖိနပ်မပါဘဲ ခြေဗလာနှင့်သွားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ
-ဖိနပ်မစီးခင် ဖိနပ်အတွင်း ကျောက်ခဲ အခြား ပစ္စည်းတခုခု ဝင်နေ မနေ စစ်ဆေးပါ
-ကြပ်လွန်းသော ဖိနပ်များ မစီးသင့်ပါ
-အရည်ကြည်ဖုများရှိပါက မိမိဘာသာ မဖောက်ပစ်ပါနှင့်
-ခြေထောက် ထုံခြင်း ကျဉ်ခြင်းများရှိပါက တနှစ်တကြိမ် ဆရာဝန်နှင့် ပြသ စစ်ဆေးပါ
-ခြေထောက်အနာ ထပ်မဖြစ်အောင် ခြေထောက်ပုံပျက်ခြင်း (Charcot neuropathy) ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် လိုအပ်လျှင် ဆီးချိုသမားများအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားသော ဖိနပ်များဖြင့် ကာကွယ်ပါ
- ရေနဲ့ သန်စင်အောင်ဆေးကြောပါ
-ပြောင်အောင်သုတ်ပီး အနာလိမ်းဆေးရည်နဲ့ ဆေးပါ
-အနာကို ဖုံမဝင်အောင် သေချာဖုံးအုပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့်ပြသပါ
-အနာဘယ်လောက်သေးသေး မပေါ့ဆဘဲ သေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
ဇီဝက ( ဆေး -၁ )